Maxay tahay sababta aan saaxiibbo ugu baahanahay? | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Maxay tahay sababta aan saaxiibbo ugu baahanahay?
Maxay tahay sababta aan saaxiibbo ugu baahanahay?
Posted by: Mahad Mohamed August 17, 2020
Himilo – Mid kamid ah tiirarka ugu muhiimsan balse si liidata looga fahmay xerada cilmiga kasmo-nafeedka waa doorka saaxiibadu ku leeyihiin nolosheenna. Wax iska caadi ayay u muuqataa inaan si qoto dheer loo qaadaa-dhigin ahmiyadda saaxiibadu noogu fadhiyaan.
Dhinac kasta oo nolosha laga eego, saaxiibbadu waa iftiin shidmaya. Marka ay timaado farxadda, saaxiibada ayaa fure u ah.
Haddaba halkan waxaan kuugu sheegi karnaa dhowr qoddob oo muhiim kaaga dhigaya in aad hadiyo jeer qiimeyso saaxiibbadaada.
1. Saaxiibbadu waxay kuu saameeyaan in ka badan inta aan garowsan tahay. Garwaaqso ama ka biya-diid, saaxiibadaadu waa kuwa raadeeya nuuca qofeed oo aad maanta tahay. Xittaa waxaa tahay natiijada ama miraha saaxiibo aan in badan maanta kuu ahayn saaxiib kuwaas oo maalmo hore qeyb weyn kasoo qaatay tabantaabada noloshaada.
2. Saaxiibbadu waxay ku siin karaan nolol xirfadeed muhiim kuu ah. Waxaa jira xaglo badan oo saaxiibtinimadu kasoo aroorto sida kuwa kugu haga hilinka aad rabto; kugu ilaaliya farxadda aad u baahan tahay: kugu caawiya inaad naftaada si fiican u barato: iyo kuwa ugu danbaynna inaan gaarto yoolkaada kuna noolaato nolol caafimaad leh kaa kaalmeeya.
3. Saaxiibbada carruureed waxay billow u tahay hab-raaca wax-barashadaada. Saaxiibbada carruurnimada aan isla soo kortaan waa kuwa kuugu muhiimsan. Waxay si ficil ah u og yihiin sirta hoose ee hibada noloshaada. Waayo waxay kula soo qaadeen tallaabooyinkii bilowga u ahaa safarka dheer ee noloshaada.
4. Saaxiibbadu waxay kugu saacidi karaan inaad qeexdo mudnaantaada. Helidda saaxiib kugu fikir ah aalaaba kuma raadeyn karo. Inaad hesho saaxiib fikradahaaga iyo kuwiisu ay kala duwan yihiin, haddana aad wada fal-geli kartaan waxay kaaga filan tahay inaad fahamto waxa mudan iyo waqtiga ay habboon yihiin. Waayo waxaad kulansatay waaya’aragnimada labada dhinac ee fikradihiinna.
5. Inaad saaxiib leedahay waxay kugu kaalmaysaa inaan saaxiibo badan abuurato. Uma baahnid saaxiibo badan si ay nolosha kaaga caawiyaan, haddana waa muhiim inaad saaxiibada saaxiibadaada ay kuu yihiin keyd dahsoon oo hadiyo jeer dhinacaada usoo dumi kara. Baro in adiga oo hilmaamin saaxiibadii hore aad kuwa hor leh abuuran karto.
6. Saaxiibbadu waxay awoodi karaan inay halgaad kula helaan sidoo kale. Dhinac madow oo saaxiibtinimada ah ayaa jira. Dadka kuugu aqoonta badan ayaa mararka qaar ah kuwa kuugu nabar-wareen badan. Haddii saaxiibadu ay sameynayaan walxo xun ama halis leh, waxay kugu ridi karaan booraan. Diyaar u noqo inaad maya ku tiraahdo saaxiibada ku niyad-jebinaya ama tumaatida kula helaya. Haddii kale waxaa ku qaadayaa daadkooda.
7. Ma noqonaysid cidlo marka aad saaxiibo leedahay. Cidladu waa laxaw gaar ahaan marka aad muddo badan wehel la’aan ku nooshahay. Sidaas darteed, helidda saaxiibo waxay kugu kaalmaynaysaa inaadan fursad u helin mashquulka cidlada.
Previous: Chelsea iyo Everton oo xiiseynaya goolhaye Ben Foster
Next: Wadahadalladii Chelsea ee Kai Havertz oo hakad galay